कति होला चिनियाँ राष्ट्रपति बस्ने सोल्टी होटेलकाे भाडा ? » Nepal Fusion	Nepal Fusion	कति होला चिनियाँ राष्ट्रपति बस्ने सोल्टी होटेलकाे भाडा ? » Nepal Fusion
कति होला चिनियाँ राष्ट्रपति बस्ने सोल्टी होटेलकाे भाडा ?
२०७६ असोज २५ गते शनिवार
काठमाडाैं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका लागि काठमाडौंको पाँचतारे होटल सोल्टी क्राउन प्लाजा पुरै रिजर्भ गरिएको छ। २ सय ८२ वटा कोठा भएको साेल्टी होटल सीको भ्रमणका लागि नेपाल सरकारले तीन दिनका लागि बुक गरेको छ ।